Website | Danya Wadi
Rohingya Documents’ Links
By danyawadi October 22, 2014 Leaveacomment
1.Rohingya in Bangladesh 2.History of Arakan 3.An open prison for the Rohingya in Burma 4.Between Integration and Secession by Moshe Yega 5.We Are LikeaSoccer Ball -2003 by Chris Lewa 6.Rape Force labor and religious persecution in Arakan by Asia Watch (1992) 7.Encyclopedia of the South East Asia Ethnography (Arakan) 8.History of Arakan by […]
အချိန်တိုအတွင်းမိမိလေ့လာလိုသောဝပ်ဆိုဒ်လင့်(Link) ကိုနှိပ်၍ လေ့လာ ကြည့် ရှု နိုင်
By danyawadi September 27, 2014 Leaveacomment
အောက်ပါ လင့်တွင် အသေး စိတ် လေ့လာနိုင်သည်။ you can see all links given under the link http://myanatmaunglay.blogspot.com/ မိမိကြည့်ရှုလိုသောဝက်ဆိုက်များအား … အချိန်တိုအတွင်း ရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ရန် လင့် ကို နှိပ်၍ ၀င်ရောက် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၀န်ကြီးဌာနများ အစိုးရမီဒီယာများ ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများ ပုဂ္ဂလိကသတင်းသမားများ ပြည်ပသတင်းဌာနများ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများ သမ္မတရုံး မြန်မာ့အလင်း ဧရာဝတီ သစ်ထူးလွင် ဗွီအိုအေ မြန်မာ ရိုက်တာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေးမုံ ဧရာဝတီဘလော့ ဒီမိုဝေယံ ဘီဘီစီ မြန်မာ နယူးယောက်တိုင်း(မ)သတင်းဌာန ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဟံသာဝတီ မြန်မာတိုင်း(မ) ရွှေဒေသ ဒီဗွီဘီသတင်းဌာန အေအက်(ဖ)ပီသတင်းဌာန ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်း ရန်ကုန်မီဒီယာ […]
By danyawadi August 31, 2014 Leaveacomment
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. အရမ်း ကို Smart ကျတဲ့ Links .. ========================== မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် (အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနိုင်ပြီး အောက်ပိုင်းတွင် အမည်အတိုင်း ကမှ အ အထိ ရှာနိုင်ပါသည်။) အမျိုးအစားအလိုက်ရှာရန် ========================== ဘာသာပြန်စာအုပ်များ http://is.gd/n4j7eL သမိုင်းစာအုပ်များ http://is.gd/B1PIZQ မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း၊စာပေကျမ်း၊စာတမ်း၊ကျောက်စာစာအုပ်များ http://is.gd/4K4SFK စာပေဟောပြောပွဲ mp3 ဖိုင်အပုဒ်( ၁၀၀ကျော် ) http://is.gd/SWF4Vb အထွေထွေသုတစာအုပ်များ http://is.gd/MxlUeR) ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းစာအုပ်များ http://is.gd/Efh2iD လှို့ဝှက်သဲဖို၊စုံထောက်စာအုပ်များ http://is.gd/OyQcO0 ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စာအုပ်များ http://is.gd/xEB8ac ဗေဒင် (၈ အုပ်) http://is.gd/Jils6L ကျမ်းမာရေးစာအုပ်များ http://is.gd/THEuKy သိုင်းဝတ္ထုများ http://is.gd/X2xMoP ဥပဒေဆိုင်ရာ […]
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာသော မတ်စ် ကင်းတာ နား ရခိုင် ခရီး စဉ်
By danyawadi February 14, 2014 Leaveacomment
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာသောမတ်စ်ကင်းတာနားသည် ယနေ့ နေ့လည် ၂း၃၀ နာရီတွင် စစ်တွေမြို့၊ အောင် မင်္ဂလာ ရပ် ကွက် သို့ သွားရောက်၍ ဒေသခံရိုဟင်ဂျာများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အထူးသတင်း စစ်တွေမြို့။ ၁၄,၂,၂၀၁၄. ရခိုင်ပြည်နယ်က လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို လေ့လာဖို့အတွက် ဒီကနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေ မြို့ကိုသွားတဲ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အ ထူး ကိုယ် စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနားကို ရခိုင် အကြမ်းဖက်သားမများကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မစ္စတာကင်တားနားစစ်တွေလေဆိပ် ကိုရောက် ရှိ ချိန်ကစပြီး သွားရာ လမ်း တလျှောက်မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလို့ ဆန္ဒပြပွဲ ဦးအောင်သူ ရခိုင်အမျိုးသမီးများကွန် ရက်အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ညိုအေး က ပြောပါ တယ်။ စစ်တွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တားနားစစ်တွေလေဆိပ်မှစပြီးသွားရာလမ်းတလျှောက်စစ်တွေမြို့ခံများက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ။ မစ္စတာ ကင်တားနား ထွက်ခွာပေးဖို့ […]
ကချင်ပြည်နယ်ရှိအဖွဲ့အစည်းများသန်းခေါင် စာရင်း ကောက် ယူ မှု ကိစ္စ ဆွေးနွေးခြင်း
By danyawadi February 9, 2014 Leaveacomment
Rohingya News topic: NDTV
By danyawadi January 26, 20142Comments
Myanmar rejects UN resolution on Rohingya Muslims World | Reuters | Thursday November 21, 2013 Myanmar rejected on ThursdayaU.N. resolution urging it to grant citizenship to the Rohingya,astateless Muslim minority group, and accused the United Nations of impinging on its sovereignty. Indonesia Buddhist temple blast protests violence against Myanmar Muslims: Government […]
မြန်မာအင်တာနက်ကြည့်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အ ဆင် ပြေ စေ ရန် မြန် မာ ၀က် ဆိုဒ် လေး တွေ
By danyawadi January 16, 2014 Leaveacomment
မြန်မာ အင်တာနက် ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် အဆင်ပြေစေရန် မြန်မာ ၀က်ဆိုဒ် လေး တွေ ကို စုစည်း ပေးထားတာဖြစ် ပါတယ်။ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ web site ကို Address bar မှာ ရိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကြည်ချင်တဲ့web site ပေါ်မှာ ကလစ်လေး နှစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ 1. http://www.planet.com.mm (သတင်းလေးတွေစုံတယ်နော်)2.www.people.com.mm (မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်လေးနော်) 3.www.khitluneg.org.mm (ရွှေဈေး၊ဒေါ်လာဈေးတွေနဲ့ သတင်းစုံတွေ) 4.www.alpha.com.mm (ZawGyi Font လေးတွေယူရအောင်) 5.www.flashband.net (သီချင်းနဲ့ MTV လေးတွေနားထောင်မယ်) 6.www.myanmarmp3.net (သီချင်းတွေ ဒေါင်းမယ်၊နားထောင်မယ်) 7.www.myanmar-music.com(သီချင်းလေးတွေပါပဲ) 8.www.freemyanmarvcd.com(vcd လေးတွေကြည့်မယ်) 9.www.khayanpyareinmat.com(vcd လေးတွေကြည့်မယ်) 10.www.shwedream.com(vcd လေးတွေကြည့်မယ်) […]
အရမ်း ကို Smart ကျတဲ့ Links … Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Links
By danyawadi December 2, 2013 Leaveacomment
((( Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Links ))) Thein Win’s status စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. —————————————————— မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် (အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနိုင်ပြီး အောက်ပိုင်းတွင် အမည်အတိုင်း ကမှ အ အထိ ရှာနိုင်ပါသည်။) အမျိုးအစားအလိုက်ရှာရန် ဘာသာပြန်စာအုပ်များ http://is.gd/n4j7eL သမိုင်းစာအုပ်များ http://is.gd/B1PIZQ မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း၊စာပေကျမ်း၊စာတမ်း၊ကျောက်စာစာအုပ်များ http://is.gd/4K4SFK စာပေဟောပြောပွဲ mp3 ဖိုင်အပုဒ်( ၁၀၀ကျော် ) http://is.gd/SWF4Vb အထွေထွေသုတစာအုပ်များ http://is.gd/MxlUeR) ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းစာအုပ်များ http://is.gd/Efh2iD လှို့ဝှက်သဲဖို၊စုံထောက်စာအုပ်များ http://is.gd/OyQcO0 ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စာအုပ်များ http://is.gd/xEB8ac ဗေဒင် (၈ အုပ်) http://is.gd/Jils6L ကျမ်းမာရေးစာအုပ်များ http://is.gd/THEuKy […]
By danyawadi November 22, 2013 Leaveacomment
ဘင်္ဂလီတွေ အနေနဲ့သာ နိုင်ငံသား ပြုခွင့် ပေးမည်ဟုသမ္မတ ပြောခွင့်ရ ပြန်ကြား ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ တတိယကော်မတီ အစည်းအဝေးက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲတွင် နေထိုင်ကြသော ဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်စုများကို ရိုဟင်ဂျာအမည်ဖြင့် မြန် မာနိုင်ငံ သားပေးရန် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းထားသော ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၎င်း ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် သမ္မတ ပြော ခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှ မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုကို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ယခုလို ဖြေကြား ထားသည်။ —————————————————————- “ ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ပေးဖို့ ဖော်ပြထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီက မြန်မာ အစိုးရ ကိုတိုက်တွန်းကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ချက် နဲ့ပတ်သက်ပြီး စာနယ်ဇင်းများရဲ့ မေးမြန်းချက်များကို ဒီကနေ့ပဲ […]
မပေါက်ကွဲသေးသောဗုံးတည်ဆောက်ပုံများကိုယခင်ဖြစ် စဉ် များနှင့် တိုက် ဆိုင် သ ရုပ် ခွဲလေ့ လာနေကြောင်း သမ္မတ ပြောရေး ဆို ခွင့် ရှိ သူ ပြော ကြား
By danyawadi October 16, 2013 Leaveacomment
Eleven Media Group မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံးတည်ဆောက်ပုံများကို ယခင်ဖြစ်စဉ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်သရုပ် ခွဲလေ့လာနေကြောင်း သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံးများကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရာ ရရှိထားသော ဗုံးများ၏ တည်ဆောက်ပုံများကို ယခင်ဖြစ်စဉ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်သရုပ်ခွဲ လေ့လာနေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ဦးရဲထွဋ်က သတင်းထောက်များကို ထိုသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “အခု ရထားတဲ့ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ဗုံးတွေရှိတယ်။ အဲဒီ ဗုံးတွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ။ ဆိုလိုတာက သုံးတဲ့ယမ်း အမျိုးအစား၊ […]